Nintendo patents ku emulator ah aaladaha mobilada | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | Ciyaaraha Android
Nintendo wuxuu had iyo jeer kula dagaallami jiray xilligan xaadirka ah qalabkiisa la qaadan karo. In kasta oo ay soo kordheen taleefannada casriga ah, iyo kor u kaca ku yimid tayada ciyaaraha la heli karo, soo saaraha Jabbaan markasta ayaa si firfircoon oo xeel dheer u sheegtay in aysan geli doonin suuqa taleefannada casriga ah. Laakiin arimuhu way is badalayaan.
Waana iyada oo loo marayo bogga internetka ee Xafiiska Patent-ka Mareykanka aan ku aragnay in Nintendo uu shatiyeeyay a Emulator-ka barnaamijka ee Gameboy, Gameboy Color iyo GameBoy Advance consoles oo loogu talagalay barnaamijyada moobiilka.
Nintendo wuxuu shatiyadeeyay emulator ka aaladaha mobilada
Ilaa iyo hada, sida kaliya ee cinwaan looga ciyaari karo soo saaraha Japan wuxuu ahaa emulators, laakiin ugu dambeyn Nintendo ayaa miyirkeedii soo gashay waxayna sii deyn doontaa emulator-keeda. Iyada oo lagu xisaabtamayo qunsuliyadaha ay ku deyneyso, taleefan kasta oo casri ah, si kasta oo ay sifooyinkiisu u fududaan karaan, waxay awoodi doonaan inay ku soo rogaan ciyaaraha qalabkaas. Sida aad ku arki karto sawirada, shatigan Nintendo waxaa loogu talagalay kombiyuutarada desktop iyo aaladaha mobilada.
Markaan tixgelinayno in xilligan Nintendo 3DS, Nintendo Wii iyo Wii U ay u oggolaanayaan inay ku daydaan SNES, NES iyo GameBoy games, uma maleynayo inay waqti dheer qaadaneyso in la soo saaro emulator la jaan qaadi kara qalabkaas. Iyo suurtagalnimada awood si sharci ah u ciyaaro cinwaanada Nintendo, gaar ahaan Mario Mario, Legend of Zelda ama Metroid saga, oo ku saabsan taleefannada casriga ah iyo kiniiniyadayada si fiican loo habeeyay si looga faa'iideysto, waxay umuuqataa fikrad runtii soo jiidasho leh.
Micno malahan Nintendo inay uun bilawdo barnaamij emulator ah, muddo. Waxa ugu macquulsan ayaa ah in kooxda horumarinta ee soo saaraha ciyaarta fiidiyowga ee caanka ah ay hagaajin doonaan cayaartooda fiidiyowga si ay ugu shaqeeyaan sida xariirta taleefannada casriga ah iyo kiniiniyadayada. Maaha in la sheego barnaamijyada mobilada cusub taasi waxay gacan ka geysan doontaa kor u qaadista iibka Nintendo, oo dhibaato badan ka haysato dhibaatada.
Haa, waa inay aad iyo aad wax u qabtaan waa sax Waqtigan xaadirka ah waxaa jira boqolaal emulators ah oo noo ogolaanaya inaan jilno inta badan qalabka wax soo saarka ee taleefannada iyo kiniiniyadayada, sidaa darteed haddii Nintendo uu doonayo inuu iibiyo badeecadeeda waa inuu na siiyaa xoogaa dhiirigelin ah. Waan arki doonaa waxa ay nacasyadan Japanese-ka ah ee waallida ahi inagaga yaabeen, in kasta oo hadda fikraddu u muuqato mid aad u wanaagsan.
Adiguna, haddii ay hagaajiyaan tayada cayaaraha fiidiyowga iyagoo leh waji yar iyo horumar xagga dhawaaqa ah, ma ka iibsan lahayd ciyaaraha Nintendo dukaanka Play?
Isha Sawirka Madaxa: qalabaynta
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Gamers, waxaad ku jirtaa nasiib: Nintendo wuxuu soo gali doonaa suuqa casriga ah
haha, sidee ahaan laheyd
haha, sidee bay noqon laheyd xiiso?
wiish wiish ayaa leh haha, maadan arkin ciyaaraha ay ku leeyihiin qunsuliyada meeriska waxay la mid yihiin 500 sano ka hor
Waxaan rabaa in qoraaga warku ii jawaabo oo uu ii sheego haddii uu yaqaan ereyga "patent preventive"
Aan aragno haddii aad hesho macluumaad dheeraad ah.
Iyadoo wajahaysa faafitaanka emulators ILLEGAL Nintendo ee Android, shirkaddu waxay go'aansatay inay rukhsad siiso emulators-keeda si loo joojiyo burcad-badeednimada. DHAMMAAD WARKA